Fa maninona no haingana ny pejy? Ahoana no hizaha toetra sy hanatsarana ny anao | Martech Zone
Ny ankamaroan'ny tranonkala dia very eo amin'ny antsasaky ny mpitsidika azy ireo noho ny hafainganan'ny pejy. Raha ny tena izy, ny pejin-tranonkala amin'ny birao antonony ny taha ambony dia 42%, ny salan'isan'ny tsimok'aretin'ny pejin'ny finday dia 58%, ary ny salan'isa aorinan'ny tsindry aorinan'ny tsindry aorian'ny tsindry dia manodidina ny 60 ka hatramin'ny 90%. Tsy fandokafana isa amin'ny fomba hafa, indrindra ny fandinihana ny fampiasana finday dia mitombo ary mihasarotra isan'andro ny manintona sy mitazona ny sain'ny mpanjifa.
Araka ny Google, ny salan'isan'ny pejy fandefasana ny pejy fidinana ambonydia mbola a malaina 12.8 segondra. Anisan'izany ireo toerana misy ny fidirana amin'ny Internet amin'ny finday ary ny hafainganam-pandeha 4G dia anisan'ny avo indrindra manerantany.
Lava loatra io haingam-pejy io, raha jerena ny 53% n'ny mpampiasa nandao ny pejy rehefa afaka 3 segondra fotsiny - ary vao mainka miharatsy eo izy io:
Inona no atao hoe hafainganam-pandeha mavesatra amin'ny pejy? Near-indray mipi-maso.
Soa ihany fa misy ny vahaolana. Alohan'ny hahatongavantsika amin'izany, andao hofaritana bebe kokoa ny maha-zava-dehibe ny hafainganan'ny pejy.
Maninona no zava-dehibe ny haingam-pejy
eMarketer dia mampiseho fa amin'ny taona 2019 Ny fandaniana doka nomerika eran-tany dia hihoatra ny $ 316 lavitrisa ary mijery ihany ny hitombo amin'ny ho avy azo jerena:
Mazava fa mandany vola be amin'ny doka ny marika ary manantena ny hahazoany tombony betsaka amin'ny teti-bolany. Saingy, rehefa tsindrio olona ny doka iray - ary ny pejin-tsindry post-click tsy mahavita mamoaka eo noho eo - azo inoana fa tsindrio miverina afaka segondra vitsy, ary vokatr'izany dia very maina ny tetibolan'ny mpanao dokam-barotra.
Ny fiantraikan'ny vidin'ny hafainganam-pandehan'ny pejy dia goavana tokoa ary tokony hataonao tonga laharam-pahamehana ny fandrosoan'ny pejy. Ireto misy metatra sy teboka vitsivitsy hodinihina rehefa manombatombana ny fampielezana dokambarotra nomerika anao ianao:
Tsy ny pejy miadana ihany no manavesatra ny mpampiasa fa mampijaly ny isa kalitao ihany koa. Satria ny Score Quality dia mifandray mivantana amin'ny anao laharana doka, ary amin'ny farany ny zavatra azonao aloam-bola isaky ny tsindry iray, pejy mampidina miadana mihena voajanahary isa.
Raha vitsy ny olona mipetrapetraka miandry ny hamoahan'ny pejinao dia vitsy ny olona mahazo vahana hiova fo. Nandao ny pejinao izy ireo talohan'ny nahitany ny tolotrao, tombontsoa, ​​fiantsoana hetsika, sns.
Amin'ny antsinjarany, ohatra, na a fanemorana iray segondra amin'ny fotoana enta-mavesatra finday dia mety hisy fiatraikany amin'ny tahan'ny fiovam-po hatramin'ny 20%.
Antsasaky ny taona 2016, fampiasana tranokala finday nandalo ny fifamoivoizana tamin'ny birao tamin'ny habetsany:
Miaraka amin'ny fandanian'ireo mpanjifa fotoana bebe kokoa amin'ny finday, ny mpivarotra sy ny mpanao dokambarotra dia (ary mbola) voatery nifanaraka. Fomba iray hanaterana fampielezan-kevitra nohavaozina ho an'ny finday dia ny famoronana pejy mitondra entana haingana.
Izay mitondra antsika amin'ny vahaolana hafainganana pejy 1 izay miatrika ny tsirairay amin'ireo olana ireo.
Ny pejy fitobiana AMP dia mampitombo ny hafainganan'ny pejy
AMP, ny rafitra loharanom-baovao misokatra nampidirina tamin'ny 2016, manome fomba iray hamoronana dokambarotra amin'ny tranokala finday haingana sy haingana izay manome laharam-pahamehana ny traikefan'ny mpampiasa mihoatra ny zava-drehetra.
Amin'ny maha-mpitarika amin'ny fanatsarana ny tsindry aorian'ny tsindry, ny Instapage dia manolotra ny fahaizana mamorona pejy fipihana tsindry taorian'ny fampiasana ny rafitra AMP:
Miaraka amin'ny Ampidiro ny mpamorona AMP, mpivarotra sy mpanao dokam-barotra dia afaka:
Mamorona pejy fidirana fipihana tsindry AMP mivantana avy amin'ny sehatra Instapage, tsy misy mpamorona
Manamarina, fitsapana A / B, ary mamoaka pejy AMP amin'ny WordPress na sehatra manokana
Manomeza traikefa amin'ny finday tsara kokoa, mampitombo ny Scores Quality, ary mitondra fiovam-po bebe kokoa
Ny orinasan-tsofina fihainoana revolisionera Eargo dia nahita valiny mahavariana hatramin'ny nampiharana ny AMP tao anatin'ny zavatra niainany taorian'ny tsindry:
Pejy fitobiana AMP miaraka amin'ny Instapage
Ankoatry ny fananganana pejy AMP miaraka amin'ny Instapage, misy fomba maro hafa hanatsarana ny hafainganan'ny pejy. Ireto misy telo amin'izy ireo hanombohana anao.
Fomba hafa 3 hanatsarana ny hafainganan'ny pejy
1. Fitaovana haingam-pandeha leverage
PageSpeed ​​Insights dia ny fitsapana hafainganam-pandehan'i Google izay manome isa ny pejyo hatramin'ny 0 ka hatramin'ny 100 isa:
Miorina amin'ny masontsivana roa ny scoring:
Fotoana amin'ny enta-mavesatra amboniny (ny fotoana totalin'ny pejy iray hanehoana atiny ambonin'ilay vala rehefa avy nangataka pejy vaovao ny mpampiasa)
Fotoana famenoana pejy feno (ny fotoana ilan'ny mpitety tranonkala iray hamoahana pejy iray aorian'ny fangatahan'ny mpampiasa azy)
Arakaraka ny maha ambony ny isa azonao, no mahatsara kokoa ny pejinao. Toy ny fitsipika ankamantatra, na inona na inona ambonin'ny 85 dia manondro fa mahomby ny pejinao. Latsaky ny 85 taona ary tokony hijery ireo sosokevitra nomen'ny Google ianao hampiakarana ny naotinao.
Ny PageSpeed ​​Insights dia manome tatitra ho an'ny desktop na ny kinova finday ao amin'ny pejinao, ary manolotra fanolorana fanatsarana ihany koa.
Mieritrereta miaraka amin'i Google: Andramo ny tranokalako, natomboky ny ekipan'ny PageSpeed ​​Insights, ny fitsapana ny hafainganam-pandehan'ny pejy finday ihany no mifanohitra amin'izany fa tsy ny finday sy ny birao. Izy io dia famantarana iray hafa momba ny hafainganan'ny hafainganam-pandehan'ireo pejy na: (
Ity fitaovana ity dia mampiseho ny ora ampidiranao, manome tolo-kevitra manokana hanafainganana ny pejy tsirairay amin'ny tranokalanao, ary avy eo manolotra ny safidy hamoaka tatitra feno.
2. Sary namboarina tanteraka (Famatrarana)
Ny fanatsarana sary misy famatrarana, fanovana habe, fanavaozana sns ... dia afaka manampy amin'ny fitsitsiana bytes, hanafainganana ny fotoana laniana pejy ary hanatsarana ny fahombiazan'ny tranokala finday. Anisan'ireo tolo-kevitra ambony hafa, Google milaza fa manaisotra sary sy GIF avo lenta tsy ilaina ary soloina sary na CSS isaky ny azo atao.
Ankoatr'izay, mora kokoa noho ny hatramin'izay ny manolotra sary voafintina sy manova habe satria afaka mandeha ho azy ireo fanovana ireo. Ohatra, azonao atao ny manana sary an-jatony hanova ny habeny ary hasiana compresse mandeha ho azy miaraka amin'ny script, hampihena ny asan'ny tanana (rehefa manangana pejy AMP, ny mari-pamantarana sary manokana dia mahatonga ho azy ireo fanatsarana mitovy ho azy).
Mety ho sarotra ny misafidy endrika endrika tsara indrindra amin'ny safidy maro azo atao. Miankina amin'ny tranga fampiasana azy io, fa ireto misy ny tena fahita:
WebP: Sary sary sy translucent
JPEG: Sary tsy misy mangarahara
PNG: Fiainana mangarahara
SVG: Sary masina sy endrika miovaova
Google dia manolo-kevitra ny hanomboka amin'ny WebP satria mamela famatrarana 30% mihoatra ny JPEG, tsy misy fatiantoka ny kalitaon'ny sary.
3. Ataovy lohalaharana ny atiny ambonimbony
Ny fanatsarana ny fahitan'ny mpampiasa ny hafainganan'ny tranokala dia manan-danja tokoa amin'ny fanatsarana ny hafainganan'ny tranokala. Izay no mahatonga ny sarinao rehefa vita ny fanatsarana, dia tokony ho azonao antoka fa voateraka amin'ny fotoana mety izy ireo.
Diniho izao: amin'ny finday iray, ny ampahany hita amin'ny tranokala dia voafetra amin'ny faritra kely iray ihany, ambonin'ilay vala. Vokatr'izany dia manana fotoana enti-mampiditra haingana ny atiny ao amin'io faritra io ianao, raha ireo singa hafa kosa eto ambany ny fisintomana aforitra ao ambadika.
Fanamarihana: Ny manampy ny mampiavaka ny AMP dia ny fametrahana ireo loharanom-pahalalana napetraka ho laharam-pahamehana, hahazoana antoka fa ireo loharano tena manan-danja ihany no alaina voalohany.
Mety ho fanamby ny fampihenana ny isan'ny sary amin'ny tranokala - indrindra ho an'ny marika antsinjarany, ohatra, misy vokatra marobe - saingy mbola manakiana ihany koa farafaharatsiny mba hampihenana ny fiantraikan'ny sary amin'ny fotoana fandefasana miaraka amin'ireo tetika telo ireo.
Ampitomboy amin'ny AMP ny hafaingam-pejy
Raha mijaly noho ny taha ambony ny pejy finday sy ny tahan'ny fiovam-po ambany noho ny hafainganam-pandehan'ilay pejy, ny pejy AMP dia mety ho fahasoavana manavotra anao.
Manomboha mamorona pejy AMP tsindrio raha te hanolotra traikefa fitetezana finday haingam-pandeha, voaatsara ary mifandraika amin'ny mpitsidika anao, ary manatsara ny isa sy kalitao azonao.
Tags: amppejy fitobiana amptaham-panovanany fihenan'ny fiovamfamatrarana sarykarazana saryInstapagesary jpgpejy pejytraikefa findayhafainganam-pandehan'ny pejy findayhafainganam-pandeha findaytranonkala findaympandalina pejypage speedmpandinika haingana ny pejyPNGfitaovana haingam-pandeha tranonkalaSVGmieritreritra amin'ny GoogleMalagasy